Xayeysiisyada Diirada Saaraya Apple ee Kaalay Kanada | Wararka IPhone
Xayeysiimaha qarsoodiga ah ee Apple ayaa ku dhuftay Kanada
Bishii Janaayo ee la soo dhaafay, qaab dhismeedka tikniyoolajiyadda korantada ee macaamiisha ee sanad walba ka dhacda Las Vegas, loona yaqaan 'CES', Apple wuxuu bilaabay olole cusub iyada oo loo marayo xayeysiisyo kala duwan oo ku xardhan boorarka ay ku sameysay. xoog saarida gaarka ah ee macluumaadka isticmaalaha.
Xayeysiisyadan, Apple waxay ku andacooneysaa taas xogta isticmaalaha ayaa ku sii jirta aaladdaSi kale haddii loo dhigo, waligood uma safraan server-yada Apple si ay u horumariyaan adeegyadooda, sida Google iyo Amazon labadaba u sameeyaan Alexa. Boorarkan ayaa bilaabay inay ka soo muuqdaan Kanada.
Waqtigaan la joogo, sida laga soo xigtay adeegsadayaasha kala duwan ee Twitter, laba boodhadh noocaas ah ayaa soo muuqday. Midkood wuxuu si sax ah ugu dhow yahay Sheybaarada Sidewalk, shirkad xarfaha loo yaqaan, oo ay iska leedahay Google. Socdaalkan waxaan ka akhrisan karnaa: Waxaan ku jirnaa ganacsiga inaan ka joogno meheraddaada. Sheybaarada dhinaca, waxay diiradda saareysaa hindisaha horumarinta magaalooyinka iyadoo loo marayo xalalka tikniyoolajiyadda iyo wax ka qabashada arrimaha sida qiimaha nolosha, gaadiidka hufan iyo isticmaalka tamarta. Boorarka kale ee lagu arkay Kanada illaa hadda wuxuu akhriyaa: Asturnaantu waa boqor. Socdaalkan wuxuu ku yaal King Street, magaalada Toronto.
Boorarkan waxay ka mid yihiin ololaha Maxaa ka dhacaya iPhone-kaaga, wuxuu ku sii nagaanayaa iPhone-kaaga, oo bilaabmay bishii Janaayo intii lagu gudajiray xuska CES ee Las Vegas. Bishii Maarso, waxay soo bandhigtay xayeysiis cusub oo qaab muuqaal ah, isla ololahan isla, kaas oo kor u qaaday astaamaha asturnaanta ee iPhone si caddaalad ah.
Waqtigan xaadirka ah ma naqaano in ujeedada Apple ay tahay iyo in kale balaariyo boorarkan dalal badanLaakiin haddii aan tixgelinno in dibadda Mareykanka, saamiga iPhone-ka uu si aad ah hoos ugu dhaco, waxay u badan tahay inuu doonayo inuu sii wado diiradda dadaalkiisa halka uu runtii ku leeyahay saamiga suuqa ee muhiimka ah, sida Mareykanka, Kanada iyo Japan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Xayeysiimaha qarsoodiga ah ee Apple ayaa ku dhuftay Kanada
Dhammaan tilmaamaha iPadOS
Tim Cook oo ku saabsan warbixinta muranka badan dhalisay ee WSJ ee ku saabsan Jony Ive: 'Sheekadaasi waa wax aan macquul ahayn'